व्यावसायीक मर्यादा पालना नगरेको भन्दै निगमले गर्‍यो दुई पाइलटलाई ग्राउन्डेड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
व्यावसायीक मर्यादा पालना नगरेको भन्दै निगमले गर्‍यो दुई पाइलटलाई ग्राउन्डेड
नीजि एयरलाइन्सलाई फाइदा पुर्‍याउनेदेखि जाहाज बिगार्ने काम गरेको आरोप
काठमाडौं — बेलैमा जहाज नउडाउने, बाहानाबाजी गर्ने, अन्य पाइलटलाई धम्क्याउने लगायतका अभियोगमा नेपाल वायु सेवा निगमले चिनिया विमान वाई १२ ई उडाउने दुई जना क्याप्टेनलाई सजाय स्वरुप ग्राउन्डेड (निलम्बन) गरिदिएको छ ।
कारवाही स्वरुप ग्राउन्डेड गरिएका क्याप्टेन भट्टराई र श्रेष्ठलाई निगमले व्यवसायिक अनुशासन उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । ‘निजी एयरलाइन्सलाई फाइदा पुग्नेगरी निगमको जहाज नउडाइदिने, जहाज बिगार्ने, उडानमा जाने पाइलटलाई धम्क्याउने, अपरेशन विभाग प्रमुख रविन्द्र शेरचनलाई असभ्य गालीगलौच र जाइलागेको लगायतका आरोप छन,’ निगमको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो ।
दुईमध्ये अलि गम्भीर अभियोग भट्टराईलाई लगाइएको छ । उनलाई निगमले निस्कासन नै गर्ने तयारी गरेको छ । ‘निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कशांकारले कम्पनीको हितविपरित काम गर्ने पाइलट, इन्जिनियर लगायतका कुनै पनि तहका कर्मचारीले गल्ती गरे अपराधसरह ठानिने भन्दै जागिरबाटै निस्काशन गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ,’ निगमका एक निर्देशकले भने । यी दुईजनाबारे निगमले आन्तरिक रुपमा छानविन गरीरहेको छ । छानविन नसकिएसम्म ग्राउन्डेड गरिएको छ । अर्थात यी दुवैलाई नसियतका रुपमा डेढ महिनादेखी विमान उडाउन दिइएको छैन ।
स्रोतका अनुसार, यी दुई जना काममा रहेका बेला करिब नौं महिना वाई१२ई विमान ग्राउन्डेड भएको थियो । ‘अहिले यो विमानको एक्लो क्याप्टेन उद्धव घिमिरेको नेतृत्वमा विमान नियमित उडिरहेको छ’, स्रोत भन्छ ।
निगमले १९ सिट क्षमताको यो विमान दुर्गम भेगको उडानकालागी ल्याएको हो । हाल निगमसँग चीनले बनाएको यो वर्गका दुइटा विमान छन् । यीनले लुक्ला र जोमसोममा टेस्ट फलाइट गर्न बाकि छ ।
उच्च भेगमा टेस्ट फ्लाइट गर्न प्रशिक्षक पाइलट चाहिने भएकाले यी विमानले ती क्षेत्रमा उडान गरिसकेको छैन । निगमले हालै एकजना चिनियाँ प्रशिक्षक पाइलटमार्फत लुक्ला र जोमसोम टेस्ट फ्लाइट गर्ने तयारी गरेको थियो । निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले दुइ क्याप्टेनको कारवाही फुकुवा भइनसकेको बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७३ २०:२८
प्रहरीलाई रोक्दै रुपन्देही-११ नेपालगन्ज गोल्डकपको उपाधि नजिक
बिहीबार संकटा र रुपन्देही-११ बीच फाइनल खेल हुने
चैत्र १, २०७३ जनक नेपाल
नेपालगन्ज — विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई रोक्दै प्रदेश ५ को ए डिभिजन टोली रुपन्देही-११ यहॉ जारी टुबोर्ग दोस्रो नेपालगन्ज गोल्डकपको फाइनलमा पुगेको छ । रुपन्देही-११ ले उपाधिका लागि पर्सि बिहीबार संकटासँग खेल्नेछ ।
नेपालगन्जको महेन्द्र रंगशालामा मंगलबार अपरान्ह भएको रोमान्चक सेमिफाइनल खेलमा रुपन्देही-११ ले पुलिस क्लबमाथि २–१ गोलको जित निकालेको हो । पहिलो हाफको ३३औं मिनेटमा डी एरियाभित्र फाउल गरेपछि पाएको पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दै पुलिसका ११ नं. जर्सीका जुमानु राईले आफ्नो टिमलाई एक गोलको अग्रता दिलाए । त्यसको तीन मिनेटमै रुपन्देही-११ ले गोल फर्कायो । ३६ औं मिनेटमा रुपन्देहीका जर्सी नं. १० का अमर डंगोलले फ्रि किकमा आएको बललाई हेडिङ गर्दै आकर्षक गोलमा परिणत गरेका थिए । पहिलो हाफको खेल १–१ गोलको बराबरीमा रह्यो ।
दोस्रो हाफमा खेल झन् रोमान्चक बनेको थियो । रुपन्देही-११ डंगोललाई रोक्न पुलिसको रक्षा पङ्तीलाई हम्मे परेको थियो । ७५ औं मिनेटमा पाएको कर्नर किकमा डंगोलले गोल थपेपछि पुलिसमाथि दबाब परेको थियो । सेमिफाइनलमा म्यान अफ द म्याच डंगोलको खेल उत्कृष्ट रह्यो । मंगलबारको खेलमा पुलिसका चार र रुपन्देहीका एक खेलाडीले पहेंलो कार्ड पाए ।
निर्धारित समय सकिनुअघि प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पुलिसले केही अवसर पाए पनि गोलमा परिणत गर्न नसक्दा नेपालगन्ज गोल्डकपबाट बाहिरिनुपरेको छ । ‘सुरुमै अग्रता लिएर पनि जोगाउन नसक्नु कमजोरी रह्यो’ पुलिसका प्रशिक्षक कुमार कटवालले भने, रुपन्देहीले सुरुदेखि अन्त्यसम्म राम्रो खेल्यो । पुलिसका कप्तान जुमानु राईले आफ्नो टिमले सोचेजस्तो राम्रो खेल्न नसकेको बताए ।
रुपन्देही-११ का प्रशिक्षक दयाराम सापकोटा दुवै टिमले राम्रो खेले पनि आफ्नो टिमले ठीक समयमा अवसरलाई उपयोग गरेकाले जित सम्भव भएको बताउँछन् । कप्तान दिलीप क्षेत्री पुलिसको टिम सधैं राम्रो हुने भएकाले आफ्नो टिम पर्याप्त मेहनतका साथ मैदानमा उत्रिएकाले सफल भएको बताए । ‘जित्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यहीअनुसार सिंगो टिमले मेहनत गरेर सफल भइयो’ उनले भने । पुलिस र रुपन्देही-११ बीच गतवर्ष बूढासुब्बा गोल्डकपपछि नेपालगन्जमा भेट भएको हो । रुपन्देहीले पुलिससँग बूढासुब्बामा १–० को हारको बदला लिएको छ ।
नेपालगन्ज गोल्डकपको फाईनल खेल बिहीबार हुने आयोजक बॉके जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ ।
टुबोर्ग दोस्रो नेपालगन्ज गोल्डकपअन्तर्गत मंगलबार भएको सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबबाट बल खोस्दै रुपन्देही-११ का अमर डंगोल (पहेलो जर्सी) । उनी म्यान अफ द म्याच भए । तस्बिर : जनक नेपाल/कान्तिपुर